Waa Su’aal Is Waydiin Mudan: Saamayn intee la eeg Ayaa Ka Dhalan Karta in Dal Uu magaciisa badalo? | Raadgoob
April 23, 2018 - Written by admin
In la badalo magac dal waxaa laga yaabaa in ay u muuqato arrin aan lagu dhiiran karin, laakiin xaaladdu sidaa way ka duwan tahay marka laga hadlayo boqorka Swaziland.
Boqor Mswati III ayaa ku dhawaaqay in hadda ka dib dalkiisa loogu yeeri doono Boqortooyada eSwatini, wuxuuna sheegay in uu arrintaas uga gol leeyahay in ajaaniibtu aysan ku khaldin dalka Switzerland.
Boqortooyada kali ah ee sida buuxda uga arrimisa dal Afrika ku yaalla ayaa ku dhawaaqday arrintan intii lagu gudo jiray xuska sannadguuradii kontanaad ee ka soo wareegtay markii ay ka xoroobeen maamulkii Britain.
Maxay ka dhigantahay in labadalo magac dal?
Boqorka ayaa horay u adeegsaday magacan isaga oo khudbad ka jeedinaya Qaramada Midoobay sannadkii 2017kii, wuxuu sidoo kale adeegsaday isaga oo khudbadda furitaanka u jeedinaya baarlamaanka sannadkii 2014kii.
In dal magaca laga badalo uma saamayn badna sida marka uu dal xornimada helo ee magaca badalanayo, arrintaas oo go’aanqaadashadeedu ay la socoto calan iyo xadka qaranka.
Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in laga fiirsado.
Xagee loo adeegsadaa magaca dalka?
Tusaale ahaan dastuurka dalka marka la fiiro, 200 oo jeer ayuu ku soo laalaabanayaa magaca Swaziland.
Shirkadda diyaaradaha ee dalkaasna waxaa la dhahaa Swaziland Airlink, lacagta iyo qadaadiicda dalkaasna waxaa ku qoran Bangiga Dhexe ee Swaziland.
Arrintaas ayaa xitaa ka hormaraysa ka baaraan dagidda laamaha dawladda, baraha rasmiga ah ee dawladdana wali laguma qorin magaca cusub.
Dalkan ayaa looga baahan yahay in uu magaca cusub ka diiwaan galiyo hay’adaha iyo ururrada caalamiga ah sida Qaramada Midoobay iyo ururka Barwaaqo Sooranka oo uu xubin ka yahay.
Waxyaabaha kale ee in la badalo ay tahay ayaa ah astaanta internetka iyo taarikooyinka gawaarida oo loo isticmaalo xarfo laga soo gaabiyay magaca Swaziland.
Dharka ay adeegsadaan ciyaartoyda ayay sidoo kale ku qorantahay SWZ oo laga soo gaabiyay magaca Swaziland.
Image caption Ciyaartoyda Swaziland sida Sibusiso Matsenjwa oo dhanka midig ka muuqda ayaa laga yaabaa in ay funaanado cusub u baahdaan
Laakiin badanaa arrin sahlan ma aha in aad diiwaan gashato astaanta internetka, dalka Suudaanta Koonfureedna kuma aysan baraarugsanayn xiriirka SS ay la leedahay ciidammadii sida milatariga u tababarnaa ee Naziga xiriirka la lahaa ee Schutzstaffel oo astaantoodu ahayd SS.
Calaamadaha waddooyinka xadka mara iyo calaamadaha boostada ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay arrintani saamayso.
Qaar ka mid ah waxyaabaha aan la badali doonin
Nasiib wanaag, magaca Swaziland meelna kama maro heesta calanka ee dalkaaas.
Baasaboorrada dalkaas ayaan si degdeg ah loogu baahan doonin in la badalo waxaana hadda ku qoran Swaziland oo af Ingiriis iyo af Faransiis ah, laakiin waraaqaha socdaalka ee cusub waxaa ku qoran magaca cusub ee eSwatini
Dalalka kale ee koonfurta qaaradda Afrikada ku yaalla ee magacyadooda badalay xornimada ka dib waxaa ka mid ah Bechuanaland oo noqotay Botswana, Rhodesia noqotay Zimbabwe iyo Nyasaland oo la baxday Malawi.
Dadka ayaase ku kala qaybsamay in magaca Swaziland lagu badalo eSwatini.
Inkastoo ay jiraan dad ku farxay in magaca Swaziland la badalay haddana waxaa jira dad kale oo dareemaya in magac baddalidda ay dadka ka mashquulinayso waxyaabo kale oo ka muhiimsan sida saboolnimada dalkaas ka jirta oo badan iyo in fayraska HIV-gu uu aad badan yahay.